Nielsen Na-atụnyere Apụl na Oroma, Podcasting na Blogging | Martech Zone
Thursday, July 13, 2006 Tuesday, July 4, 2017 Douglas Karr
Dị ka m na ntinye gara aga na 'tubes' jupụta na ịntanetị, ọ na-eju m anya mgbe niile ndị na-azọrọ na ha bụ ndị ọkachamara na-ebili ma kwuo ihe nzuzu n'ezie. Nielsen na nso nso a weputara ihe atụ nke ndị ọrụ Podcast na ịde blọgụ. Nke a bụ ezigbo ntụnyere. Ndị ọrụ Podcast bụ ndị na-eri ihe, ndị na-ede blọgụ bụ ndị na-eweta ngwaahịa. Kedu ka ha si nwee mmekọrịta n'ụwa? N'ihi na ha abụọ na-eji ịntanetị? Ihe omuma atu nke otu ndi mgbasa ozi kachasi adighi nma…
On a yiri nke ahụ, nwetara aha na Blog Seth mgbe mkparịta ụka nke ABC (Audit Bureau of Circulation) na-agbanwe agbanwe mgbe niile na-eme ka o kwe omume maka akwụkwọ akụkọ iji nweta ọnụ ọgụgụ ka mma ka esemokwu na-aga n'ihu ọda.
Tags: onye na-enyocha nyochandị na-ede blọgụakwụkwọ akụkọ ojujupọdkastịPodcast ọrụPublishingseth godin
Echere m na isi nkenke nkọwa dị mkpa banyere okwu apụl-na-oranges gị. Ee, mgbe ndị na-ege ntị Pọdkastị bụ ndị na-eri ihe, na ndị edemede blọọgụ bụ ndị na-emepụta ihe, ọ bụghị eziokwu na creators nke pọdkastị bụ ndị na-emepụta ihe? Ọ bụrụ na mgbagha a dị mma (echekwara m na ọ bụ) mgbe ahụ Ntụle Nielsen dabere na ụdị ndị nrụpụta dị iche iche, ma ọ bụ ụdị ndị ahịa dị iche iche dị ka ihe kwesịrị ekwesị. Ekwenyere m na ahụbeghị m nyocha Nielsen nke ị rụtụrụ aka na ya, mana echere m na ntụnyere ha abụghị nke a kwụpụrụ dịka ị tụrụ aro. Ee, usoro mgbasa ozi anaghị enweta ya ma a bịa na ọdịnaya Web-nyefere, mana echere m na nke a, nkatọ gị siri ike.
Enwere njikọ na Nielsen ederede dị na post. Nke a bụ otu ihe kwuru: "Ọtụtụ ndị ebudatara pọdkastị n'oge na-adịbeghị anya karịa bipụtara blog ma ọ bụ tinye aka na mkpakọrịta nwoke na nwanyị n'ịntanetị, dị ka nchọpụta ọhụrụ nke Nielsen // NetRatings mere."
M guzo n'akụkụ apụl ka oroma o ọ bụ nnọọ ihe na-abaghị uru tụnyere. Enwere m ekele na ị kwụsịrị site na ịza ajụjụ, ọ bụ ezie! Ekwenyesiri m ike na ị ga-ahụ ọtụtụ nyocha dị egwu na saịtị m karịa Nielsen. 🙂